PSJTV | मर्फीको कानून भर्सेज ओलीको उखान
मर्फीको कानून भर्सेज ओलीको उखान
ओलीसंग यतिबेला लचिलो वा अत्याचारी हुने बाहेक तेश्रो बिकल्प छैन
शनिबार, ०५ साउन २०७५ राजेश मिश्र
भूईंबाट माथि उफ़्रिएको कुनैपनि बस्तु कालान्तरमा भूईंमै बजारिनेछ। कुनै बस्तुसंग धेरैबेर खिचखिच गर्योभने त्यो बस्तु निश्चित रुपले भाँचिने छ। यी र यस्ता धेरै उखान टुक्काहरु संसारभरी "मर्फ़ीज ल" अथवा मर्फीको कानूनको रुपमा प्रचलित छन्। तर, दोश्रो विश्व युद्द हुँदा यी एडवार्ड मर्फी नामका व्यक्ति अमेरिकी बायुसेनाका एक कप्तान थिए। उनले आफ्ना युद्दक बिमानचालकहरुलाई सचेत गराउने क्रममा बोलेको पहिलो वाक्य थियो, "गलत दिशा उन्मुख हरेक कुराको परिणति गलत नै हुनेछ।"
उनको यो बहुचर्चित वाक्य कुनै पनि देशको संबिधानमा लेखिएको छैन। यसको कुनै कानून छैन। तर, सन् १९९० को जुलाई १७ तारिकमा उनी मर्नुभन्दा पहिलेनै उनको यो बोलीलाई बेलायतको अक्सफोर्ड बिश्वबिद्द्यालयबाट प्रकाशित शब्दकोशले "मर्फी'ज ल" भनेर एउटा नयाँ नाम र अर्थ दिईसकेको थियो। त्यसपछि बिश्वभरीका साहित्यकार, ईतिहासकार, राजनेता, वकील, प्राध्यापक मात्र होईन, जांडको टेबलका गफ़ाडीहरुले समेत आफ्नो तर्कमा दम दिन मर्फीको कानूनलाई आधार बनाउन थाले। यो एउटा उखान टुक्का बन्यो।
भूईंबाट उडेको बेला
म आज, "भूईं बाट माथि उफ़्रिएको कुनैपनि बस्तु कालान्तरमा भूईंमै बजारिनेछ" भन्ने मर्फीको नाम दिएर अरुले नै बनाएको मर्फीको कानूनबाट आफ्नो कुरा शुरु गर्दैछु। मर्फीको कानून उखान टुक्का हो। नेपालका दुई तिहाई बहुमत प्राप्त ईतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री के पी ओली पनि टुक्के र उखानेका रुपमा प्रख्यात छन्।
एकछिन, २०४८ सालतिर फर्कौं। अहिलेका तन्नेरी युवाहरुलाई त्यो बेलाको अवस्था थाहा नहुनसक्छ। त्यो बेलाको ईतिहास लेखिनै बाँकी छ। गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालपछि जनताले चुनेको बहुमतको सरकार सत्तामा थियो। त्यतिबेला दरवारिया आठपहरियाहरु, कम्युनिष्टहरु र कर्मचारीहरु मात्र होईन, कांग्रेस भित्रैको एउटा कित्ताको लागि गिरिजाप्रसाद काउसो भएका थिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको छत्रछायाँमा कांग्रेसभित्रको एउटा सम्भ्रान्त बर्ग मौलाएको थियो। गणेशमान सिंहको अभिभावकत्वमा जातीय कांग्रेसीहरु अचानक आफ्नो फणा उठाउँदैथिए। तर यो दुईटै वर्ग राजधानी काठमाण्डौमा सीमित थियो। अर्कोतिर गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा जुझारु कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु देशभरी छरिएका थिए।
गिरिजाप्रसादले सिंहदरवारको अनुहार देख्न पाएको तीन महिना पुगेको थिएन। अचानक कर्मचारी आन्दोलन शुरु भयो। नयाँ सरकारले खुट्टा टेक्न पाएको थिएन। दरवारले आफ्नो चाल खेलिसकेको थियो। यसमा सघाउन अग्रपंक्तिमा तत्कालीन एमालेका नेताहरु अघि सरे।
आन्दोलन तीन महिना तन्कियो। गिरिजाप्रसादले घुंडा टेकेनन। अन्तत: एमालेले कर्मचारीहरुको साथ बिचैमा छोडिदियो। अनसनकारी कर्मचारीहरुले शिक्षण अस्पतालमा आफनै हातले जूस पिएर आन्दोलनको अन्त्य गरे।
भूईंमा बजारिएको बेला
ओलीको तत्कालीन पार्टीले तीन लाख कर्मचारीको आन्दोलन उठाएरपनि हात लागी शुन्य भयो। बरु उल्टै कर्मचारीहरु "आन्दोलनलाई बिचैमा धोका दिएको" भन्दै एमालेपार्टीसंग क्रुद्द भए। गिरिजाप्रसादले तत्कालै नेपाली कर्मचारी तन्त्रमा ऐतिहासिक पजनी गरेर आन्दोलनकारीहरुलाई थान्को लगाईदिए। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद संग दुई तिहाई होईन, सामान्य बहुमत मात्र थियो।
अहिले ओलीसंग दुईतिहाई बहुमत छ। तर उनी संग यतिबेला लाचार हुने अथवा अत्याचारी हुने बाहेक तेश्रो बिकल्प छैन। उतिबेला बिपक्षमा हुँदा तीन लाख कर्मचारीको सहयोगमा समेत गिरिजाप्रसादको सत्ता हल्लिएन। अहिले एकजना सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको कृशकाय शरीरको आव्ह्वानले ओलीको सत्ता नैतिक रुपले डगमग हुँदैछ।
ओलीको पार्टीले त्यतिबेला पनि स्वार्थी समूहको बलमा राजनीति गर्न खोजेको थियो। असफल भयो। ओली अहिले मार्सी चामल पस्किने माफिया समूहको स्वार्थका लागि आफ्नो दुई तिहाई बहुमतले दिएको अवसर गुमाउंदैछन। ओलीको उखान टुक्काको भरमा शासन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा मर्फीको उखान टुक्काले सावित गर्दैछ।
अवसर गुमाउंदै ओली
एमाले र माके एकीकरण पछि धर्सो मुनि बनेको नेकपा नेकपा सैद्दान्तिक रुपले नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो। उ सत्तामा छ। उ संग दुई तिहाई बहुमत पनि छ। तर सरकारको चाल कस्तो छ? कमजोर। किन? सरकारको आफ्नै व्यवहारले।
नेपालको ईतिहासमा शायदै प्रतिपक्षी दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चूईङ्क्क नबोली समर्थन गरेको होला। यसपटक नेपाली कांग्रेसको सरकारले ओलीलाई यस्तो अभूतपूर्व सुविधा दियो। यस्तो अवसर ओलीबाहेक अरु कुनै प्रधानमन्त्रीले पाएको थिएन। तर भयो के?
सरकारले यातायात सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने प्रचारवाजी गर्यो। केही दिन उत्तेजनामा बित्यो। अन्तर्यमा के रहेछ भने, अष्ट्रेलियामा बसेका एन आर एनका नेताले लगानी गर्ने भनिएको मयूर यातायातको लागि कोटेश्वर पूर्वको रुट खोल्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीकै एक हनुमान कार्यकर्ता सांसद महेश बस्नेतको पनि त्यो व्यापारमा लगानी रहेछ। मयूर यातायातले रुट पायो। यातायात सिण्डिकेट बिरुद्द सरकारले थालेको कारवाही अचानक सेलायो।
सरकारले बेलामा काम पुरा नगर्ने र कमसल काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुमाथि कारवाही गर्ने अभियानको प्रचार गर्यो। सरकारकै सम्बन्धित विभागका मन्त्री निर्माण व्यवसायीको प्रतिरक्षामा उत्रिए। पछि थाहा भयो, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सह अद्द्यक्ष पुष्पकमल दाहालले "आश्रय" लिएको घरका धनी आफै यस्तो कैफियत गरेको सूचिमा परेका रहेछन। अहिले यो अभियानका बारेमा केही सुनिदैन।
सुन काण्डका बारेमा मुलुक तातियो। "ठुला माछा" समात्ने सरकारको अभियान गोरे र एकजना हुण्डी व्यापारीमा पुगेर टुङ्गिएको छ। यसको परिणाम के हुन्छ? सबैलाई थाहा छ। प्रहरी, भन्सार, राजस्व, अध्यागमन जस्ता निकायमा पैसा खाएर नियुक्ति दिने सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई यसले पानी माथिको ओभानो बनाएर उम्न्मुक्ति दिनेछ। गोरेलाई ठाउँको ठाउँ मार्ने योजना त्यसै बनेको थिएन।
गैर सरकारी संस्थाका संचालकहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति बिवरण झुकाउने सरकारको निर्णयलाई लाई सरकार आफै लगाम लगाउन बाध्य भयो। किन होला? ओलीको दल गैर सरकारी संस्था मार्फत आउने बिदेशी पैसाले नै फस्टाएको हो। यसमा नेपालमा ईसाई धर्म प्रचार गर्नेहरुको बाहुल्य छ।
मनमोहन अस्पतालको अवधारणा शुरु भएदेखिनै ओलीको पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ जस्ता आधारभूत जनाधिकारमाथि राज्यको भन्दा ब्यापारीहरुको हालीमुहाली कायम गर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्न थालेको हो। यसमा अब उनकै दलका सह अद्द्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्दमा लुटेको पैसालाई कानूनी देखाउन खडा गरिएका एक पात्र दुर्गा प्रसाईंको स्वार्थ पनि मिसिएको छ।
जनताका आवश्यकता र आकांक्षा महंगी, सुशासन, भ्रष्टाचार, दैनिक जीवन यापनका लागि हिंड्ने सहज बाटोघाटो, सन्तानका लागि सहज सुलभ शिक्षा र परिवारका लागि स्वास्थ सेवा हुन्। ओली रेल र पानीजहजका कुरा गरेर सम्म्रिद्दिको दुहाई दिँदैछन। मुलुकको प्राथमिकता के हो? ओली आफ्नो प्राथमिकतामा मात्रै केन्द्रित छन्।
नेपाल टेलिभिजन जनताले राज्यलाई तिरेको करबाट संचालित सरकारी बिद्दुत्तीय मुखपत्र हो। ओलीका पर्चाकार कार्यकर्ता संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफूलाई कडा प्रश्न गर्नेको कार्यक्रम नै रद्द गरिदिए। त्यसको साटो आफ्नै कार्यकर्ता पत्रकारलाई यथेष्ट खर्च दिएर ओलीको महिमा गाउने पाक्षिक कार्यक्रम चलाउन लगाए। ओली त्यहाँ पुगेर रोईदिए। नाटकको मंचको पर्दा खुल्यो। मर्फीको कानूनले भन्छ, "धेरै रोएर आँशु सुक्दैन, आँशु पुछ्न तँछाड मछाड गर्नेहरुको रुमाल चैं पक्कै भिज्छ।"
उनको बिरोध गर्नेहरुको मुख बन्द गर्न सामाजिक संजालमा "ईन्टरनेट योद्दा" हरुको दस्ता तयार हुँदैछ। ओलीको नाफाको जिन्दगीले नेपाल मुलुकलाई र नेपालावासीलाई नाफा हुने कुरामा शंका छ।
डाक्टर गोविन्द केसीको अपहरण शैलीमा गरिएको "उद्दार" अनि संस्कृत बिश्वबिद्दालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट गरिएको वास्तविक अपहरणले यो सरकार फासिस्ट हुँदै गएको आभाष हुन्छ।
फेरि मर्फीकै कानूनबाट कुराको बीट मारौं, "यदि भगवानले हामीलाई भोट दिनैका लागि जन्माएका हुन् भने, हामीलाई योग्य उम्मेदवार पनि दिने थिए !" ओली हाम्रा लागि भगवानले पठाएका उम्मेदवार होईनन। त्यसैले यी उपयुक्त छैनन्।
फेरी मर्फीकै अर्को कानून, "कुनै कुरा काम नलाग्ने भयो भने, विकल्पमा नयाँ ल्याउनु ठीक हो!" अब चार बर्ष सात महिनाका लागि को ल्याउने हो नयाँ ? यसबारेमा मर्फीको कानून मौन छ।
लेखक पिएसजे टिभीका प्रधान सम्पादक हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच
८ मंसिर, काठमाडौं । भारतले नेपालको कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको दुई सातापछि सरकारले पुस पहिलो सातासम्म वार्ताका लागि भारतलाई पत्र पठाएको छ । यसै साता पठाएको पत्रमा नेपालले भारतबाट कालापानी ...
29th Aug 2019 पिएसजे न्युज
कार्यविधि नहुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ मा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ। सोही दफामा टेकेर आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुद्दा पर्ने क्रम बढे पनि व्याख्या ...
23rd Sep 2019 पिएसजे न्युज
चितवन जिल्ला अदातलले पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका वादी प्रतिवादी साक्षीहरुसँग बकपत्र लिन थालेको छ। बकपत्र सकिएपछि मुद्दाको पेसी चढ्ने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। अदालतमा आइतबार पुडासैनीको मोवाइलबाट ...